Ebba Busch :”Waa noo muhim midowga qoysaska” - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha Kristdemokraterna Ebba Busch Thor sawir: Sammy Steen/Sveriges Radio
Ebba Busch :”Waa noo muhim midowga qoysaska”
La daabacay måndag 20 augusti 2018 kl 15.09
Hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Ebba Busch Thor oo maanta qayb ka ahayd wareeysigii laanta wararka Ekot ee hoggaamiyeyaasha xisbiyada ee xilliga ololaha doorashada ayaa wax laga weydiiyey siyaasadooda ku aaddan mideynta qoysaska kala maqan.
Xisbiga Kristdemokraterna ayaa doonaya inuu dowlad la soo dhiso xisbiga Moderaterna iyadoo waliba siyaasadda Moderaterna tahay in aan wax laga bedelin sharciga ku meel gaarka ee qaxootiga kaasoo adkeynaya sidii ay reeraha kala maqani ku midoobi lahayeen.
Laanta wararka Ekot oo weydiisey Ebba Busch Thor iney ku raacsan tahay xisbiga Moderaterna siyaasadiisa waxey ku jawaabtay:
– Waxaa jira laba arrin iyadoo tan koowaad tahay inaanan dib ugu noqon doonin siyaasaddii qaxootiga ee shaqeyneysay wixii ka horeeyey sanadki 2015. Waxaan u baahanay siyaasad ka duwan tii hore oo kontoroolan, waxase inaga muhim inoo ah in caruurta yar yari waalidkood kula midoobi karaan Sweden, ayey tiri Ebba Busch Thor.
Ebba Busch Thor oo ka jawaabeysa iney ka mid noqon karto dowlad wadata siyaasad adag ee qaxooti taasoo xadideysa midowga reeraha kala maqan waxey tiri:
– Aniga iyo hogaamiyaha xisbiga Modertarna waxaan taaganahay in la helo siyaasad qaxooti oo kontoroolan oo aan furneyn. Balse wuxuu xisbigeygu culayska saarayaa sidii muhimada loo siin lahaa in caruurta yar yari la midoobaan reerkooda, ayey tiri Ebba Busch Thor.
Tomas Ramberg oo laanta ekot uga faalooda siyaasadda arrimmaha gudaha ayaa sheegay in siyaasadda xisbiga Kristdemokraterna u janjeerto dhanka midigta taasoo ah in la adkeeyo siyaasadda qaxootiga. Midda kale iney siyaasadda saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkuna tahay mid xaddideysa qaxootiga yimaada iyadoo ugu danbeynta la fulin doono siyaasadda xisbiyadaa.